Zip ပြုပြင်ရေးကိရိယာ ပြုပြင်ပါ Zip ဖိုင်မှတ်တမ်း။ Zip Software ကို Fix ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Zip Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး ၏အရေးကြီးသောစံ zip ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen Zip Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်၀ င်းအပါအ ၀ င်အခြားပြိုင်ဖက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်RAR နှင့်အခြား zip စျေးကွက်အတွင်းရှိကိရိယာများကိုပြုပြင်ပါ။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Zip Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေပါတဲ့ archive ကိုငါဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အမှားတချို့ကြောင့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ထိုအခါငါအသုံးပြုခဲ့သည် DataNumen Zip Repair ထိုသို့မှော်ပြုလေ၏။
ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေပါတဲ့ archive ကိုငါဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အမှားတချို့ကြောင့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ထိုအခါငါအသုံးပြုခဲ့သည် DataNumen Zip Repair ထိုသို့မှော်ပြုလေ၏။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဧပြီလ 22nd, 2020
သင့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် zipပြုပြင်။ ဒါဟာငါ့အကိုပြုပြင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသော software ကိုဖြစ်ခဲ့သည် zip ဖိုင်။
ဧပြီလ 10, 2020
ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအစီအစဉ် ZIP မော်ကွန်းတိုက်။ ငါအကြံပြုတယ် ... တံခါးလိုရိုးရှင်းတယ်
အောက်တိုဘာလ 27, 2019
DZIPR ဟာအံ့ဖွယ်အမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါလုပ်မယ်လို့ထင်တဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ MB ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုရခဲ့တယ်ost အစဉ်အမြဲ။
အများကြီးကို Fixed - Life Saver!
မှ 1GB လောက်ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ရရှိခဲ့သည် Zip ဖိုင်များ။ ငါတကယ်ကျပ်ပေမယ့် D ကိုထင်ခဲ့တယ်ZIPR စာရေးတံအားဖြင့်လယ်ထွန်သည်
မှ 1GB လောက်ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ရရှိခဲ့သည် Zip ဖိုင်များ။ ငါတကယ်ကျပ်ပေမယ့် D ကိုထင်ခဲ့တယ်ZIPR သည်စာရေးတံဖြင့်တိတ်တဆိတ်ထွန်ယက်သည်။ ငါဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းမဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသုံးရန်အလွန်မြန်သည်။ အလွန်အမင်းအလုံအလောက်ကအကြံပြုလို့မရပါဘူး
ဖိုင်အချို့ကိုအရန်ကူးထားတယ် Zip ကျွန်တော့် Mac G4 မှတ်စုစာအုပ်မှဖိုင် ငါသူတို့ကို PC သို့ back up လုပ်ရန်နှင့် un ကိုကြိုးစားရန်အပေါ်သို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးzipငါတွေ့ပြီ
ဖိုင်အချို့ကိုအရန်ကူးထားတယ် Zip ကျွန်တော့် Mac G4 မှတ်စုစာအုပ်မှဖိုင် ငါသူတို့ကို PC သို့ back up လုပ်ရန်နှင့် un ကိုကြိုးစားရန်အပေါ်သို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးzip, ငါဘာမျှမကအကျင့်ပျက် 10.2 GB ကို archive ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် သံသယထဲကငါ D ကိုကူးယူZIPR ကိုရှာပြီးကျွန်တော့်ဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါနဲ့ငါရှေ့ဆက်သွားပြီးစမ်းစစ်တဲ့ဗားရှင်းရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ငါထပ်ပြေး။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သော်လည်းဒေတာအချို့ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ပေးရုံသာမက၊ အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Tech Support မှကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေကြားနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေနပ်မိပါသည်။ သူတို့သည်အလွန်အထောက်အကူပြုပါသည်။ OS X ဗားရှင်းအတွက်အချိန်မရွေးအစီအစဉ်ရှိပါသလား။
အသုတ်ပြုပြင်ပြီးနောက်ဖိုင်များအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး windows PK မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏ mac သို့ဖြည်ချသည်Zip နှင့်မြေပုံဆွဲ SaMBa ကွန်ယက် Drive ကို။ ငါ
အသုတ်ပြုပြင်ပြီးနောက်ဖိုင်များအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး windows PK မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏ mac သို့ဖြည်ချသည်Zip နှင့်မြေပုံဆွဲ SaMBa ကွန်ယက် Drive ကို။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ အထောက်အပံ့သည်အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်အလေးအနက်ပြောကြားလိုပါသည်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန် !! ငါသံသယရှိခဲ့ပေမယ့်ရုံ backup လုပ်ထားပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည် zip ကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း
ကောင်းပါတယ် ဖိုင်ကိုပျက်စီးနေသောကြောင့်အခြားပရိုဂရမ်မှဖိုင်တစ်ခုကိုကူးယူခြင်းထက်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ ဤပရိုဂရမ်က၎င်းကိုပြုပြင်သည်။ က
ကောင်းပါတယ် ဖိုင်ကိုပျက်စီးနေသောကြောင့်အခြားပရိုဂရမ်မှဖိုင်တစ်ခုကိုကူးယူခြင်းထက်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ ဤပရိုဂရမ်က၎င်းကိုပြုပြင်သည်။ အရမ်းတောက်ပတဲ့အစီအစဉ် !!!!!!!! *****
ငါ p ဖို့နေရာရှာခဲ့တယ်ost ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသော်လည်းရှာ။ မတွေ့ရ။ ငါအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်အတူပြintoနာကိုရသူကိုအခြားသူများကိုကူညီလို zip ဖိုင်။ ငါဖြစ်ခဲ့တယ်
ငါ p ဖို့နေရာရှာခဲ့တယ်ost ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသော်လည်းရှာ။ မတွေ့ရ။ ငါအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်အတူပြintoနာကိုရသူကိုအခြားသူများကိုကူညီလို zip ဖိုင်။ ငါ PC ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ စ၍ IBM (သို့) Microsoft မတိုင်မီတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးလျင်မြန်စွာ၊ အလွယ်တကူထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ငါမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး zip အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းပြုပြင်အစီအစဉ်ကို။
ငါ၌ဂိမ်းများစွာနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနေသောအခြားဖိုင်အမျိုးအစားများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ ဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်မရမီ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ခြင်းသည်၎င်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည်
ငါ၌ဂိမ်းများစွာနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသောအခြားဖိုင်အမျိုးအစားများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ ဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်မရမီ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ငါအသုံးပြုခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! မင်းကငါ့အသင်းကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်
နောက်တဖန် 16 လအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပြန်သွား။ : DZIPR ကိုတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်
$ 30 ငါ
ငါသုံး $ 30
ငါပြန်လည်ထူထောင်ရန်အကြှနျုပျ၏ရှာပုံတော်အများအပြားထုတ်ကုန်ကြိုးစားခဲ့ပြီ Zip တစ်နှစ်ပြည့်အီးမေးလ်မော်ကွန်းတိုက်ပါ ၀ င်သော်လည်းယခုထိမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ငါ
ငါပြန်လည်ထူထောင်ရန်အကြှနျုပျ၏ရှာပုံတော်အများအပြားထုတ်ကုန်ကြိုးစားခဲ့ပြီ Zip တစ်နှစ်ပြည့်သည့်အီးမေးလ်မော်ကွန်းတိုက်ပါ ၀ င်သော်လည်းယခုအချိန်အထိအောင်မြင်မှုမရရှိသေးပါ။ ငါ: D ၏သရုပ်ပြ version ကို download လုပ်ခဲ့တယ်ZIPR သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီရင်ခံစာမှအားပေးမှုရရှိသောကြောင့်ငွေပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုကူးယူခဲ့သည်။
စိတ်ပျက်မိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့် support @ repair- ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။zip-files.com ။ အဆိုပါ Tech Support ကိုယ်စားလှယ်များ: D ကနေအမှားမှတ်တမ်းများတောင်းဆိုခဲ့သည်ZIPR နှင့်ဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ငါကြိုးစားရန်အဘို့အလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
ဤထုတ်ကုန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာအထောက်အပံ့သည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်အရေးကြီးသောမှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ost ကောင်းဘို့အတွက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဓာတ်ပုံ 3GB သိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ။ ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲနှင့်ရည်းစားဓာတ်ပုံများသိမ်းဆည်း! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသွင်အပြင်အကြံပြုချက် - စာရင်းပြုစုနိုင်စွမ်း
အသွင်အပြင်အကြံပြုချက် - အဘယ်အရာကိုဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းမခံခဲ့ရစာရင်းပြုစုနိုင်စွမ်း?
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော OpenOffice စာရွက်စာတမ်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်! : D များအတွက်ကြီးမားတဲ့လက်မ -up,ZIPR!
ဒီထုတ်ကုန်ကကြီးတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအချိန်အများကြီးကယ်တင်ပါပြီ။ သင်ရှိနိုင်သည့်အခြားအက်ပ်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ငါ့အမှားကိုပြင်လိုက်တယ် Zip ကတိထားတော်အတိုင်းဖိုင်။
Andy Duong ပါ
ငါအလုပ်လုပ်မယ်လို့မယုံခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကောင်းတယ်။ အရမ်းဆိုးတာက ACE ကိုပြုပြင်လို့မရဘူး RAR ဖိုင်များလည်းပါဝင်သည်။
Floppy မှပျက်စီးသွားသောဖိုင်တစ်ခုဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဖိုင်တွဲ ၄၀ အနက် ၅ ခုသာအချို့သောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပျက်စီးခဲ့သည်။
ငါ၏အပျက်စီးအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်။zip ဖိုင်များ။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက * နှင့်အတူဒုက္ခရှိခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။zip သူတို့ကိုယ်သူတို့ခဲ့သောဖိုင်များ zipped ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 10 ထွက်
ငါ၏အပျက်စီးအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်။zip ဖိုင်များ။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက * နှင့်အတူဒုက္ခရှိခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။zip သူတို့ကိုယ်သူတို့ခဲ့သောဖိုင်များ zipped ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 10 ထဲက 10!
Peter Brook ပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ၉၀၀ MB ကျော်ရတယ်။
ကျွန်ုပ်မှာကုန်ပစ္စည်းအပြည့်ရှိတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကို 300MB ဖိုင်ပြန်ပြင်ပေးတယ်
ဝိုး! သငျသညျအကြှနျုပျကို2နာရီတန်ဖိုးရှိအချိန်နှင့်မြို့အနှံ့ပြန်နှင့်ထွက်ခရီးစဉ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောထိုရိုးရှင်းသောအသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတွေ့ရခြင်းသည်လန်းဆန်းစေသည်! ငါတကယ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမရချင်တဲ့စိတ်ကုန်သွယ်အပေါ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ : DZIPR ငါ့ကိုမှုတ်!
"CRAY အမှားတွေကိုအမှန်ပဲဖြေရှင်းတယ်: D"
Most သင်တစ် ဦး ကို download လုပ်ပါလျှင်အချိန်ရဲ့သင့်ရဲ့လွင်ပြင်လွဲချော်သွားတာ zip အထူးသဖြင့်တော့ zip ဖိုင်
Most သင်တစ် ဦး ကို download လုပ်ပါလျှင်အချိန်ရဲ့သင့်ရဲ့လွင်ပြင်လွဲချော်သွားတာ zip အထူးသဖြင့်တော့ zip ဖိုင်တွင် ISO ဖိုင်တစ်ခုသာပါဝင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်သည်ငါ့၌ CRC အမှားကိုပြုပြင်သည် zip ISO ဖိုင်ကိုချို့ယွင်းချက်များမရှိဘဲထုတ်ယူခွင့်ပြုသည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှကြီးမားသော sfx ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သောလူများအတွက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ က
အင်တာနက်ပေါ်မှကြီးမားသော sfx ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ အဲဒါပြင်တယ် zip ဖိုင်များနှင့် sfx ဖိုင်များသည်ကြီးလှ၏။ ဒါပေမယ့်ဒီဆော့ဗ်ဝဲကပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ် rar ဖိုင်များလည်း :(
လုံးဝ! သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်းသို့မဟုတ်အထူးနှုန်းများစာပေများကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီး CRC ရည်ညွှန်းချက်ကိုတည်းဖြတ်ပါ
လုံးဝ! သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုင်းသို့မဟုတ်အထူးနှုန်းများစာပေများကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီး CRC ရည်ညွှန်းချက်ကိုတည်းဖြတ်ပါ။ CRC နှင့် Cyclic Redundancy တို့သည်တူညီသောအမှားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပို။ ပို။ ချီးမွမ်းချင်လျှင်, ယနေ့ငါပါရှိသောတစ် shareware utility ကိုများအတွက်အီးမေးလ်ကနေတဆင့် update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် CAB ဖိုင်ထဲမှာ Zipဖိုင်။ ကောင်းပြီ၊ ဝင်းzip, PKZip & WinAce တို့ကဖိုင်သည်အကျင့်ပျက်ပြားခြင်းနှင့်ဖွင့ ်၍ မရပါကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါ D: ကတဆင့်ပြေးZIPR ကိုသာလုပ်ခဲ့တယ် zipဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေမယ့်ပူးတွဲရ CAB ဖိုင်သည် byte match အတွက်အတိအကျ bait ဖြစ်သည် cabငါမွမ်းမံမှုအတွက်လိုအပ် file ။ ဒီနည်းနည်း D လို့ထင်ရတယ်ZIPR Gem သည် Microsoft လိုင်စင်ယူရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ,
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး PC ကို utility ကိုများအတွက်ငါ့မဲရလိမ့်မယ်။ ငါ D ကိုဝယ်ကတည်းကZIPR, ငါ CRC မကောင်းတဲ့ပြသခဲ့သည်သို့မဟုတ်အခြားရှိခဲ့ဖိုင်တွေအပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး PC ကို utility ကိုများအတွက်ငါ့မဲရလိမ့်မယ်။ ငါ D ကိုဝယ်ကတည်းကZIPR, ငါ CRC မကောင်းတဲ့ပြသခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြားပြproblemsနာများရှိခဲ့ဖိုင်တွေအပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်zip သို့မဟုတ် WinAce သည်ပိတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်။ : DZIPငါ R မှာငါပစ်ချအရာအားလုံးကို fixed သိရသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာရဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အပိုင်းတစ်ခု။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဝယ်လိုက်တယ် DataNumen Zip Repair ထက်ငယ်သော
နှစ်နာရီအကြာကperfectlyုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ !!! အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံတက်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်
နှစ်နာရီအကြာကperfectlyုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ !!! အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံအတွက်တက်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်
Ryan Long ပါ
ပရိုဂရမ်အပြည့်အစုံကိုကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ကူးယူပြီးကျွန်ုပ်၏ကျွန်ုပ်ထံပေးပို့လိုက်သောပြုပြင်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ download လုပ်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်ပရိုဂရမ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ disk ၏ ၉၁% ကိုပြုပြင်သည်။
Orlando တွင်, ဖလော်ရီဒါ
မင်္ဂလာပါ မင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုငါဝယ်လိုက်ပြီ၊ ဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပဲ ZIP ဖိုင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ D ကိုအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်ZIPR.
ငါ့မှာ 800 MB ရှိတယ် zipSolaris တွင် 97,00 ရှိပြီး၎င်းသည် "central dir" ၌အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးတာနဲ့ငါထက်ပိုပြီးမသုံးနိုင်ဘူး
ငါ့မှာ 800 MB ရှိတယ် zipSolaris တွင် ၉၇,97,00 ပါ ၀ င်သော file သည် ၄ ​​င်း၏“ ဗဟို dir” တွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးတာနဲ့ပထမဆုံး ~ ၃၀၀၀၀ ထက်ပိုပြီးမရရှိနိုင်ဘူး zippk ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်အသုံးအဆောင်များကိုပြင်ဆင်ပါzipဂနှင့်ဝင်းZip ကူညီရန် _nothing_ ကိုပြု၏။
ငါ m ကိုသိသောကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ost သိုမဟုတ်ဖိုင်အားလုံးသည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် archive ၏ "မာတိကာ" တွင်အမှားတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ငါသုံးခဲ့တယ် Datanumen's DZIPဖိုင်တွဲ၏ဖိုင်များ၏ ၉၈% ကိုပြန်လည်ရယူရန် R! ငါကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတွေ့သောကြောင့်ဝမ်းသာပါသည် Datanumen ပစ္စည်းကောင်းတွေကို archive ထဲကနေထုတ်ယူဖို့ know-how နဲ့အတူ၊ အထူးသဖြင့်ဗဟို dir ပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့အခါ။
Cleanscape software ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
Tom McLean ပါ
ဖရက်ဒရစ်, နယူး Brunswick
http://rmse.awardspace.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင့်ကိရိယာကိုရှာတွေ့ပြီး၊ သင့်ကိရိယာသည်အင်္ဂါရပ်များစွာနှင့်အတူကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုပြောချင်ပါတယ်။
http://rmse.awardspace.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင့်ကိရိယာကိုရှာတွေ့ပြီး၊ သင့်ကိရိယာသည်အင်္ဂါရပ်များစွာနှင့်အတူကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုပြောချင်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းသောအလုပ်။ သင့်မှာမေးလ်စာရင်းသို့မဟုတ်သတင်းလွှာတစ်ခုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။ လေးစား, JA
စိတ်မထားပါနဲ့။ ငါ SOOO ပျော်ရွှင်မိတယ် သင့်ရဲ့အကူအညီအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် 100% ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာသင်တို့ကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးတော့မည်မဟုတ်။ ဟားဟား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စိတ်မထားပါနဲ့။ ငါ SOOO ပျော်ရွှင်မိတယ် သင့်ရဲ့အကူအညီအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် 100% ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာသင်တို့ကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးတော့မည်မဟုတ်။ ဟားဟား။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ!
Andover, MN, အမေရိကန်
Funabashi-shi, Chiba, ဂျပန်
သင့်ရဲ့မြန်ဆန်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖြေရှင်းချက်အလုပ်လုပ်ခဲ့! File Splitter ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်အလွန်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အဆင့်မြင့်ခဲ့သည် Zip
သင့်ရဲ့မြန်ဆန်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖြေရှင်းချက်အလုပ်လုပ်ခဲ့! ဖိုင်တွဲကြီးများဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အလုပ်လုပ်သည် Advanced Zip Repair ဖိုင်တိုင်းကိုပြန်လည်ရယူလိုက်ပြီ။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကျေနပ်လောက်သောဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်၍ ထုတ်ကုန်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။ နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ပြီးပြည့်စုံသောနေ့ရက်ရှိသည်။
ချားလ်စ် Thompson က
Lakeland, FL, အမေရိကန်
ငါတို့မှာ Gigabyte ၆၀ ရှိတယ် zip ဖွင့်လို့မရဘူးသောဖိုင်ကို။ Advanced Zip Repair ဒါကြီးလွန်းလို့မပြင်နိုင်ဘူး သို့သော် DataNumen ငါ့ကိုထောက်ပံ့ပေး
ငါတို့မှာ Gigabyte ၆၀ ရှိတယ် zip ဖွင့်လို့မရဘူးသောဖိုင်ကို။ Advanced Zip Repair ဒါကြီးလွန်းလို့မပြင်နိုင်ဘူး သို့သော် DataNumen ဖိုင်ကိုပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ 1 Gigabyte ဖိုင်တွေအဖြစ်ခွဲလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆော့ဗ်ဝဲအပိုင်းအစတခုကိုပေးတယ် Advanced Zip Repair တိုင်းတစ်ခုတည်းကိုအောင်မြင်စွာပြုပြင်။ ကျနော်တို့ကအခြားပြုပြင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲကြိုးစားခဲ့ဖူး, ဒါကြောင့်ငါဆက်ဆက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ် DataNumen ငါတို့အနာဂတ်မှာအခြားမည်သည့်ဒေတာပြproblemsနာများရှိပါက။ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောထောက်ခံမှု!
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Zip Repair v3.5
အမျိုးအစားခွဲအားလုံးကိုပြုပြင်လို့ရပါတယ် Zip ဖိုင်များနှင့်ကိုယ်တိုင်ဖြည်ချသည့်ဖိုင်များအားလုံး။
ဒေတာ၏သမာဓိကိုစစ်ဆေးပြီးမှတ်တမ်းတွင်မမှန်ကန်ကြောင်း CRC တန်ဖိုးများကိုပြင်ဆင်ပါ။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Zip ဖိုင်တွေနဲ့ Zip 4GB ထက်ပိုကြီးတဲ့ item ဖိုင်များကို။
spanned ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Zip ဖိုင်များ, အုပ်စုခွဲ Zip ဖိုင်များနှင့် encrypted Zip ဖိုင်များကို။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု Zip floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု Zip ဖိုင်များကို client ကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
ပုံသေထဲကပြန်လည်ရယူထားသောပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူရန်ပံ့ပိုးမှု Zip သို့မဟုတ် SFX archive ကို။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Zip Repair ပျက်စီးသွားသော Recover ရန် Zip Archives
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ zip ဖိုင်များပျက်စီးသည် (သို့) ပျက်စီးသည်၊ ၎င်းကိုသင်ပုံမှန်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Zip Repair စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် zip ဖိုင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသူတို့ထံမှဒေတာများပြန်လည်ရယူပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ zip ဖိုင်တွဲများ DataNumen Zip Repairကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ zip ဖိုင်များကို။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုကိုရွေးချယ်ပါ zip ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည့်ဖိုင်
သင်ထည့်နိုင်သည် zip ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ရှာရန် button ကို zip ဖိုင်ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်လည်ပြုပြင်ရန်
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Zip Repair ပြုပြင်လိမ့်မယ် zip xxxx သည်အရင်းအမြစ်၏အမည်ဖြစ်သောနေရာရှိ xxxx_recovered ဟုခေါ်သည့်လမ်းညွှန်သို့ဖိုင်နှင့်ဖိုင်အားလုံးကိုဖြည်ချပါ zip ဖိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ zip ဖိုင်ပျက်စီးသွားသည်zipပုံသေ output output directory သည် Damaged_recovered ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
output directory name ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်
output directory ကို browse နှင့် select လုပ်ဖို့ခလုတ်ကို။
ခလုတ်နှင့် DataNumen Zip Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း zip ဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
အရင်းအမြစ်လျှင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် zip ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဤကဲ့သို့သောစာတို box ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင် output directory ကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းရှိပစ္စည်းများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် Zip ဖိုင်။
DataNumen Zip Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair ၁.၄ ကိုမေလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များတွင် log ကိုဖော်ပြရန်ပံ့ပိုးမှု။
DataNumen Zip Repair 2.8 ကိုAprilပြီလ 22, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Zip Repair 2.6 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair 2.3 ကိုAprilပြီလ 10, 2018 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အတွင်းမှပြန်လည်ရယူထားသောပစ္စည်းများအလိုအလျောက်ထုတ်ယူပါ Zip မော်ကွန်းတိုက်။
DataNumen Zip Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Zip Repair 2.0 ကိုနိုဝင်ဘာလ 23, 2012 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ထောက်ပံ့ Zip ဖိုင်နှင့် Zip 4GB ထက်ပိုကြီးတဲ့ပစ္စည်းကို။
DataNumen Zip Repair ၁.၂ ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက် ၂၀၀၆ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
spanned / split သို့အထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်စေ zip ဖိုင်များကို။